Niknayman: March 2008
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးမြင့်သိန်းရဲ့ ဈာပန အခန်းအနားကို စင်ကာပူရှိ မန်ဒိုင်း Mandai သုဿာန်မှာ မတ် လ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေ ၇ နာရီ ၃၀မိနစ် မိသားစုဝင်များ ဖြစ်တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူနဲ့သားဖြစ်သူတို့ အပါအ၀င် စင်ကာပူရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများ နှင့် မိတ်ဆွေ အပေါင်း အပါများ လိုက်လံ ပို့ ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ညနေ (၇)နာရီ (၁၅) မိနစ်ခန့် မှာ ဦးမြင့် သိန်းရဲ့ ရုပ်ကလပ်ကို ရေခဲတိုက် မှ သယ်ဆောင် လာပြီး ဈာပနအခန်းအနားကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 10:12 AM
'Wake Up' by Lo-Star - Benefit single for Burma Campaign released
More information on the Burma Campaign UK – www.burmacampaign.org.uk
Posted by အာဇာနည် at 9:30 AM
Posted by အာဇာနည် at 8:18 AM
Posted by အာဇာနည် at 8:05 AM
ပြည်ခိုင်ဖြိုး ( င်္ကြ့ဖွတ် ) သို့ မဟုတ် စစ်အာဏာရှင်တို့ ၏ဒေါက်တိုင်များ
Read this doc on Scribd: Pyi Khaing Phyo-USDA
Posted by အာဇာနည် at 9:31 AM
နအဖ ၏သမိုင်းကို လေ့လာခြင်း (အမျိုးသားရေးမို့ဒို့ အားပေး)
Posted by အာဇာနည် at 9:16 AM
Posted by အာဇာနည် at 2:44 AM
Posted by အာဇာနည် at 8:30 AM
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် သင့်ကို အရေးတကြီး အလိုရှိသည်။ ( ညီညွတ်ခြင်း အပိုင်း ၆)
သင့်ကို (အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက်) ယခုအခါမှာ အရေးတကြီး လိုအပ်နေပါပြီ။
မြန်မာလူမျိုးတွေ အလွန်အာကျယ်ခဲ့ကြသည်။ "သာကီမျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ"မင်းမျိုးပေါ့ …ဒါ့ထက် ကဲပြီး ပြောချင် သေး သည်။ ဘုရား၏ အမျိုး၊ သိဒ္ဓတ္ထ၏ အမျိုးအနွယ် ဟူ၍ပင် …… ……. မိမိကိုယ်မိမိ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူ ဟု အမွှန်းတင် ၍ သခင်နေရာမှ စကားပြောခဲ့ကြသည်။
"ကျွန်ကုလား၊ မယားတောသူ" တစ်ခေတ်တစ်ခါက အဲဒီလို ပြောနိုင်အောင် မြန်မာပြည်၊ မြန်မာလူမျိုးတွေ ကြီးကျယ်ခဲ့ကြသည်။ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝခဲ့ကြသည်။ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မျက်နှာပန်းလှခဲ့ရသည်။ ထိုကာလများကား လွမ်းစရာ ဖြစ်၍ အတိတ်တွင် မှုန်ဝါးဝါးနှင့် မှတ်ပင် မမှတ်မိနိုင်တော့ပါ။
သာကီမျိုးဟေ့ ဒို့ဗမာ။ ယခုအခါ ဘာမျိုး ဖြစ်နေပြီလဲ။ ကျွန်ကုလား၊ မယားတောသူ အခုရှိသေးလား။
အော်အော်၍ ရယ်ရမည်လား … ရှိုက်ရှိုက်၍ ငိုရမည်လား …. (ဒေါသ ကိလေသာ) ကတော့ ဒီအတွေး ပေါ်လာတိုင်း အကြီးအကျယ် ထကြွနှောင့်ယှက်လာနေသည်။
အဲဒီခံစားချက် (အနုသယ) သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာတမျိုးသားလုံး၏ သန္တာန်တွင် အလွန်စွဲမြဲစွာ ကိန်းအောင်း နေပြီး မြန်မာတမျိုးသားလုံး၏ ဆင်းရဲခြင်း အနိဋ္ဌအာရုံနှင့် တိုက်လိုက်တိုင်း ထိန်းမရ သိမ်းမရ ထွက်ပေါ်၍ လာနေပေပြီ။ မျိုးချစ်စိတ်ပေပဲလား။ အနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်ထားသည့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများကို တော်လှန်ချင်သော သတ္တိပေပဲလား။ ကျနော်တို့၏ သန္တာန်တွင် ဤစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်း ဆင်းရဲလှသည်။ ရင်ထဲတွင် လှိုက်၍ လှိုက် ၍ တက်လာသည်မှာ ဆို့၍ ဆို့၍ လာသည်။ ရံခါ မျက်ဝန်းအတွင်း တား၍ မမှီလိုက်သော မျက်ရည်များကလည်း ရောက်နှင့်နေတတ်ပါသည်။ ဤဝေဒနာသည် မခံနိုင်အောင် ဆိုးဝါးစွာ နှိပ်စက်ပါသည်။ မခံသာသော ဒုက္ခဝေဒနာ ဖြစ်ပါသည်။
မင်းမျိုးဟု ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသော မြန်မာတို့သည် (မ.ဆ.လ၊ န.၀.တ၊ န.အ.ဖ) ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် ကျွန် အောက်က သဘောက်ဘ၀သို့ ကျရောက်ခဲ့ရပြီ။
မြန်မာတို့ ချမ်းသာကြွယ်ဝစဉ်က အိန္ဒိယမှ ကုလားလယ်ကူလီများကို ခေါ်၍ စေခိုင်းခဲ့ကြသောလည်း ဤမိစ္ဆာ တို့လက်ထက်တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး (Africa) ပင် မကျန်အောင် သွားရောက်၍ မြန်မာလူမျိုး ယောက်ျား၊ မိန်းမ မကျန် ကျွန်ခံခြင်း၊ ကျွန်အလုပ်ကိုပင် မိမိအိတ်အတွင်းမှ ပိုက်ဆံငွေကြေးကို အရင်းအနှီးမတည်၍ လိုလို လားလား အလုအယက် သွားလုပ်နေကြရပြီ။ "ကျွန်မြန်မာ" ဘ၀သို့ ရောက်နေပေပြီ။ ကျွန်ဘ၀ရောက်နေသော မြန်မာအချင်းချင်းလည်း ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အတွက် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွား သတ်ဖြတ်သည့် အဆင့်ပင် ဖြစ်နေသည်ကို အခုတလော ထိုင်းနိုင်ငံမှ မြန်မာအလုပ်သမားအချင်းချင်း သတ်ဖြတ်မှုများက သက်သေ ခံနေပေသည်။
"မယားတောသူ" သိပ်လှပတဲ့ စကား။ မြန်မာတို့ ရှေးက အကြင်လင်မယားအဖြစ် အိမ်ထောင်ပြုကြတော့ မည်ဆိုလျှင် မိဘရိုသေ၊ အိမ်မှုကျွမ်းကျင်၊ ဘာသာ ကိုင်းရှိုင်းသော တောသူ တောင်သားကို တန်ဖိုးထား ရွေးချယ် ခဲ့ကြသည်ကို အထင်အရှားပြဆိုသော စာချိုးလေးပင် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါတော့ "မယားတောသူ" ဘ၀မှ HIV တောသူ၊ AIDS တောသူ၊ B ပိုး တောသူ၊ C ပိုးတောသူများ ဖြစ် ကုန်ကြပြီ။ ရင်နာစရာ ကောင်းလေစွ။ နားနှင့်ပင် မကြားဝံ့သာ။ အစစအရာရာ ကျဆင်းလာသော စီးပွားရေး စံနစ်ဆိုးကြောင့် (သေလို့မရဘဲ နေနေရသော) ဘ၀တစ်ခုကို အသိဥာဏ်ရှိသလောက် ရင်ဆိုင်နေရသော တောသူလေးများ၊ တိုင်းရင်းသူလေးများ Karaoke၊ အနှိပ်ခန်း (တချို့ အနှိပ်ခန်းမှာတော့ ယခုခေတ် အခေါ်အ ဝေါ် အတိုင်း ရေ၊ မီး အစုံ All in one အကုန်ပါတယ်ဆိုပြီး ….. သိကြမှာပေါ့။)၊ ပြည့်တန်ဆာအခန်း၊ ပြည်တွင်း မှာတင်မက ပြည်ပအထိ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြရပြီ။ Bangkok မြို့ပေါ်က နာမည်ကြီး ပြည့်တန်ဆာ အခန်းတွေမှာ မြန်မာပြည်က တောသူလေးတွေ၊ တိုင်းရင်းသူလေးတွေ ရာနှင့်ချီပြီး ရှိနေပြီ။ အံ့သြစရာ ကောင်းပါသလား။ လုံးဝ မအံ့သြပါ။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ အဖြေရှိပါသည်။
"ပညာမဲ့သူတို့ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစားဖြစ်ချင်လာကြပြီဆိုလျှင် အဲဒီ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူအများသည် ဆင်းရဲခြင်း သို့ အလုံးစုံ ရောက်ကြရသည်" တဲ့။
ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမကို သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များမှတဆင့် ဟောကြားကြသည့်အတွက် ဤသို့ နာဖူး၊ မှတ်ဖူး၊ လေ့လာဖူးခဲ့သည်။ သွေးထွက်အောင် မှန်သည်။ ပြည်တွင်းမှာရော၊ ပြည်ပမှာရော မြန်မာလူမျိုးတွေ ကျွန့် အောက်က သဘောက်ဘ၀သို့ ရောက်နေရခြင်း၊ မြန်မာအမျိုးသမီးလေးများ တိုင်းရင်းသူလေးများ၊ လူမျိုးကွဲ ဘာသာကွဲ ငွေရှင်ကြေးရှင်များ၏ ပျော်တော်ဆက်များအဖြစ် အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးတွက် ပေးဆပ် နေရခြင်းသည် ပညာမဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများကြောင့် ဆိုလျှင် မမှားနိုင်ပေ။
သမ္မာ သမ္ဗုဒ္ဓ (ဘုရားရှင်) သာရှိလျှင် ဤသို့များ ပြောလေမလားဟု ကျနော်၏ ဒေါသစိတ်ဖြင့် အထင် ရောက်မိပါသည်။
"မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကို အမြစ်မှ လှန်ဖို့ သင့်ကို အလိုရှိသည်" အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကွယ်တော့မည့် အရေးကို မြင်နေ ရပြီဖြစ်သည့်အတွက် "ချစ်သားတို့ ငါဘုရားတည်ထောင်ထားသော သာသနာသည် ဤမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ကြောင့် ကွယ်လုပြီ" ဒီလိုများ ပြောလေမလား?
ငါ၏ သားတော်တွေကိုလည်း သတ်ကုန်ပြီ။ ငါ၏ သားတော်များကိုလည်း သင်းကွဲအောင် လုပ်နေပြီ။ ငါ၏ အဆုံး အမ အဆိုအမိန့်များကိုလည်း ဟောကြားခွင့်ကိုတောင်းခံနေရသည်။ ကတိခံဝန်ချက်တွေ လက် မှတ်ထိုးပေးနေရသည်။ မဟောရလို့ ပိတ်ပင်တားဆီးခြင်းလည်း ခံနေရပေသည်။ (မှတ်ချက် ။ ငါဘုရားဆိုသော အသုံးအနှုန်းကို သမုတိသစ္စာဖြင့် ရေးပါသည်။)
- ဘုရားကိုလည်း မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့က ၎င်းတို့၏ ပုံတူထုကုန်ပြီ။
- တရားတော်ကိုလည်း ဟောကြားခွင့် ပိတ်ပင်ခံနေရပြီ။
- သံဃာကိုလည်း ပေတစ်ရာလမ်းမ ပေါ်မှာ သတ်ဖြတ်နေကြပြီ။ ထောင်သွင်း အကျဉ်း ချနေကြပြီ။ ထောင် အတွင်း ထပ်မံ၍ တိုက်ပိတ်နေကြပြန်ပြီ။
ဒင်းတို့ ဘာတွေလဲ။ ဘယ်ဘာသာမှ ဒါမျိုး ခွင့်မပြု။ ဘာသာမဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများ ဖြစ်ကြသည်မှာ ဧကန်ပင် ဖြစ်ပေ သည်။ ဤမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ကို ရှင်းလင်းရန် သင့်ကို အလိုရှိသည်။ လူတန်းစားမရွေး၊ အသိဥာဏ်မရွေးကို အလိုရှိသည်။ မိမိတို့၏ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် မိတ်ဆွေတို့အားလုံးကို အလိုရှိသည်။
မိမိတို့က လက်ဦးမှုရအောင် သတိရှိဖို့လိုသည်။ မိစ္ဆာတို့ကို လက်ဦးမှု ရယူနိုင်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ လို အပ်သည်။ မိတ်ဆွေ၊ ဆွေမျိုး၊ သူစိမ်း ခွဲခြားနေ၍ မရသော အချိန်အခါကို ရောက်နေပေပြီ။
စစ်သား၊ ရဲ၊ ကြံ့ဖွတ်၊ စွမ်းအားရှင် ဆိုသော အပေါ်ယံအရေခွံကို ကြည့်၍ ဆုံးဖြတ်မရသလို ဘုရားလူကြီး၊ ရပ် ကွက်လူကြီး၊ အမျိုးသမီး စွမ်းဆောင်ရှင် ရယ်လို့လည်း ကြည့်ရှုဆုံးဖြတ်၍ မရပါ။ ကျနော်တို့ ဖွေရှာ၍ သုတ် သင်နိုင်ဖို့ သတိရှိရမည်မှာ (မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဘာသာမဲ့၊ ဘာသာဖျက်၊ လူမျိုးဖျက်) များကို မြင်အောင် ရှာဖွေကြည့်ရှု ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
- အရေခွံကိုကြည့်ပြီး မုန်း၍မရသလို
- အရေခွံကိုကြည့်ပြီးတော့လည်း ကြည်ညို၍ မရပါ။
မကောင်းမှုကို အစဉ်ပြုနေသော အဓမ္မ၀ါဒီများသည် မဝေးသောကာလတွင် အကြမ်းဖက် လူသတ်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီ။ အပြစ်မဲ့သော ပြည်သူများတို့ ………..ဆန္ဒခံယူပွဲလောက်ကို မမြင်စေချင်ပါ။ ထို့နောက်ကွယ်မှ လူသတ်ပွဲကြီး အဆင်သင့်ရှိနေသည်ကို သတိပြုမိဖို့ လိုပါသည်။ လူသတ်ပွဲ နောက်တစ်ကြိမ်လာပါလိမ့်ဦးမည်။
ဒူးထောက် အသေမခံ၊ သေရမည်ဆိုလျှင် တိုက်ရင်းသာ အသေခံကြမည်။ တော်လှန်ရေးအတွက် အသင့် ရှိကြပါ။
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် သင့်ကို အရေးတကြီး အလိုရှိသည်။
"အရှည်အတို မတူညီကြသော လက်ငါးချောင်း၏ ညီညွတ်မှုဖြင့် အရာဝတ္ထုတစ်ခု ကို မြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင် ထားနိုင်သလို အသိဥာဏ်အဆင့်အတန်း အမျိုးမျိုးသော ပြည်သူလူထု၏ ညီညွတ်မှုဖြင့် လွတ်လပ်ရေး ကို ခိုင်မာမြဲမြံစွာ ဆုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါစေ" ဟု ဆန္ဒပြုရင်းဖြင့် Unity စာစုကို ဤတွင် နိဂုံးချုပ် လိုက်ပါသည်။
ကျန်တော်၏ ညီညွတ်ရေးဆောင်းပါးများ..အစအဆုံးဖတ်ရှုလိူပါက PDF file download တင်ပေးထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ညီညွတ်စွာ အဓမ္မ၀ါဒီများကို တော်လှန်ကြပါစို့ လား ခင်ဗျာ
Posted by အာဇာနည် at 9:22 PM
Posted by အာဇာနည် at 1:53 PM
အနုပညာရှင်တွေကို အတင်းအကျပ် ဆိုတာထက် ပိုင်ရာဆိုင်ရာတွေကနေ တဆင့်၊ အခြေခံ ဥပဒေဆန္ဒခံယူပွဲ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေး၊ ထောက်ခံဖို့ ကို အခွင့်အရေးများစွာ ပေးပြီးလုပ်ခိုင်းဖို့ ၊ ကျော်ဆန်းကနေ ရုပ်ရှင် ကောင်စီ ကို တာဝန်ပေးထားတယ်၊
Posted by အာဇာနည် at 9:33 PM
ဤ Unity Part V တွင် လုပ်ငန်းပိုင်းလေးတွေ ခွဲပြီး တင်ပြထားပါတယ်။
အားနည်းချက်များရှိရင် ဖြည့်စွက်ယူကြပါ ခင်ဗျား။
၁။ စိတ်သာရှင်စော ဘုရားဟော - မိမိရဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်တဲ့ ဓမ္မနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ မိမိရဲ့ အတွင်းသန္တာန် ကို လည်း သိပါပြီ။
၂။ မျှော်နေရင် လင့်သွားမယ်။ မျှော်ခြင်းအလုပ်ကို လုပ်နေမည့်အစား လင့်မသွားရအောင် နိုင်ရာတာဝန်ကို ကိုယ်စီယူပြီး Work Done ဖြစ်အောင် လုပ်နေဖို့လည်း တိုက်တွန်းပြီးပါပြီ။
၃။ အဆိုးဆုံးအတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ရာမှာလည်း နီးရာရန်သူ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကို လက်ဦးမှု ရယူနိုင်ဖို့လည်း နှိုးဆော် ပြီးပါပြီ။
ဒီကနေ့တော့ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူ၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်၊ Partition ခွဲတဲ့ အလုပ်အပိုင်းကို တင်ပြလိုပါတယ်။
လူတန်းစားအသီးသီး၊ အလွှာအသီးသီး၊ ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုး၊ အရည်အချင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကို ကာကွယ်ဖို့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကို တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါပြီ။
ဥာဏ်ရှိသလို၊ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးမှီသလို ကိုယ်စီကိုယ်ငှ ဆိုင်ရာ၊ နိုင်ရာ တာဝန်ကို ယူနေကြပါပြီ။
ဥာဏ်ရည်မတူလျှင် စွန့်လွှတ်နိုင်သည့် အရည်အသွေး မတူပါ။
မည်သို့ပင် မတူသော်ငြားလည်း ကျနော်တို့သည် အဆင့်အမျိုးမျိုး၊ အရည်အသွေးအမျိုးမျိုး အားလုံးကို မိစ္ဆာ ဒိဋ္ဌိတို့အား တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် လိုအပ်နေပါသည်။ အားလုံးသော သူတော်ကောင်းတို့သည် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ဟူသော တူညီသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့ကို ဆန့်ကျင် တွန်းလှန်နေခြင်းသည် ညီညွတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာက Partition ပါပဲ။ ဓမ္မပေတံဖြင့် တိုင်းတာ၍ မိမိ အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်သော အလုပ် ကို မိမိကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူနိုင်ဖို့၊ လုပ်နိုင်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ သူတပါး၏ လုပ်နိုင်သော အရည်အသွေးနှင့် နှိုင်းယှဉ်ဝေဖန်ခြင်း၊ ကောင်း/ဆိုး ဝေဖန်ခြင်းတို့ကို မပြုကြဘဲ မိမိ၏ Partition အတွင်း၌ ကိုယ်လုပ်နိုင်သော အလုပ်ကို၊ ကိုယ်ယူနိုင်သော တာဝန်ကို ထိရောက်စွာ အကောင်းဆုံး လုပ်နေရန် အရေးကြီး ပါတယ်။
အလုံးစုံမတူညီနိုင်ပါ။ ကျနော်တို့သည် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး စောင်းကြည့်၊ ငဲ့ကြည့်ပြီး မိမိပေတံဖြင့် သူတပါးကို တိုင်းတာဝေဖန်နေခြင်းဖြင့်၊ အပြစ်တင်နေခြင်းအားဖြင့်
မိမိ၏ ပစ္စုပ္ပန်ကို ဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘဲ အလွန်သန့်ရှင်း သစ်လွင်သော Present Moment ကို ဖြုန်းတီး ပစ်လိုက်မိသလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
- ရည်ရွယ်ချက်တူညီသော အင်အားစုများ အချင်းချင်း အင်အားချည့်နဲ့အောင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖြိုခွဲမိသလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
- မိမိ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် အင်အားစုများကလည်း ဤသို့ဖြစ်အောင် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ရန်သူကို စိတ်အားတက်စေနိုင်ပါတယ်။
- တစ်ဦးကို တစ်ဦး မှားတယ်၊ မှန်တယ် ဝေဖန်ရင်း အလွန်အန္တရာယ်ရှိသော အခြေအနေသို့ အချိန်နဲ့အမျှ နီးကပ်သွားပြီး ဘာမှမပြင်ဆင်လိုက်ရဘဲ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Community (အဖွဲ့အစည်း) နှင့် ပြုလုပ်မှရသော အခြေအနေများကို ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်ပါ။ အချင်းချင်း ဆက် သွယ်ခြင်း၊ အချင်းချင်း နားလည်မှုရှိခြင်း၊ အချင်းချင်း ပူးပေါင်း၍ တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းတို့သည် ပြုကိုပြုရ မည့်အရာလည်း ဖြစ်သည်။
Partition လုပ်ရန်ဟုဆိုရသော အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တွင် Attitude (သဘောထား) သည် အရေးကြီးပါသည်။ Positive Attitude သည် အကောင်းဆုံး Partition ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓ၏ အဘိဓမ္မာတွင် ဤအဓိပ္ပာယ်ကို ယောနိသောမနသိကာရ ဟူသော ပါဠိဘာသာဖြင့် ဖော်ပြထားပါ သည်။
ယောနိသောမနသိကာရ ဆိုသော ပါဠိဝေါဟာရသည် ဓမ္မသဘာဝလောကကြီးကို ဆန့်ကျင်ဖက်မလုပ်ဘဲ လော ကကြီး ၏ အမှန်သဘောအတိုင်း နှလုံးသွင်းခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ (တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော် သူတစ်ပါးကို သူတစ်ပါးကို Judgment လိုက်လုပ်မနေဘဲ လောကဓမ္မအတိုင်း လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ ရှိသည် ကို ကိုယ် တိုင် နားလည်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်တူသူများ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံး Partition အတွင်း နေထိုင် ကျင့်ကြံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။)
(ကိုယ်လည်း ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူ၊ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ့်ဥာဏ်နှင့် ကိုယ်ရွေးချယ်) အလုပ်ပြီး မြောက်အောင် လုပ်။
(သူလည်း သူ့တာဝန် သူယူ၊ သူ့အလုပ် သူလုပ်၊ သူ့ဥာဏ်နှင့် သူရွေးချယ်) အလုပ်ပြီးမြောက်အောင် လုပ်။ အလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့သာ အဓိက ဖြစ်သည်။
ထိုသို့လက်ခံနားလည်နိုင်ရန် ကျနော်တို့တွင် လက်ခံနိုင်သော စွမ်းရည် (Acceptance) ကြီးဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကွယ်ရမည်ဟူသော ရည်မှန်းချက်တူညီသော သမ္မာဒိဋ္ဌိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်သည် နှင့်အညီ တူညီသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွင် ဝေဖန်ခြင်းသည် အပြုသဘောဆောင်၍ နားခံသာ အောင် ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ကြသည့် သဘောမှတပါး အပြစ်တင်ခြင်း၊ အဆိုးမြင်ခြင်းများ မရှိသင့်ပေ။
ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်ယူ …အချင်းချင်း အရည်အသွေးမတူနိုင်တာတွေကို အတင်းမညှိဘဲ၊ ဖိအားမပေးဘဲ အပြုသဘောဆောင်သော အမြင်ဖြင့်သာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းသင့်ပေသည်။
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတွက် တူညီသော ဦးတည်ချက်တစ်ခုကိုသာ အာရုံပြု၍ ကိုယ့် Partition အတွင်း ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်ပြီးအောင် လုပ်နေကြဖို့ အရေးကြီးပါသည်။ အချိန်တိုင်း အန္တရာယ်ဆီသို့ ဦးတည် သွားနေပါသည်။ နောင်မှ လုပ်ရမည့် အသိဥာဏ်ချိန်ညျှိမှု ကိစ္စကို နောင်မှ ဆွေးနွေးကြပါစို့။
အရင်ဆုံး ဦးစားပေးလုပ်ရမည့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော်လှန်ရေးကို အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးနိုင်အောင် ကိုယ့် အလုပ် ကိုယ်လုပ်ရင်းဖြင့် ချီတက်ကြပါစို့။ ညီညွတ်ကြပါစို့။ လူတန်းစားအားလုံး တော်လှန်ရေးအတွက် လိုအပ်ပါသည်။ မလိုအပ်သောသူဟူ၍ မရှိပါ။ အားလုံးကို ကြိုဆိုပါသည်။
(တော်လှန်ရေးတွင် လူတန်းစားအားလုံး ပါဝင်ကြပါစို့။)
Posted by အာဇာနည် at 1:40 PM
Posted by အာဇာနည် at 1:39 PM
Posted by အာဇာနည် at 6:46 AM
မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးအတွက်မိုင် ၃၀၀၀ ကျော် လမ်းလျောက် နေသော ငြိမ်းချမ်းရေးဆက်သား နှစ်ဦး ထံ မှ နောက်ဆုံး သတင်း ရရှိပါသည်။
၃။၂၆။ ၂၀၀၈ တွင်. Twin Falls (Idaho) မှ စထွက်လာပြီး. Route 84 အတိုင်း ချီတက်နေပါသည်။ ရာသီဥတုမှာ အင်မတန်ဆိုးဝါး နေပြီး နှင်းမိုး များ အဆက်မပြတ် ရွာချနေသောကြောင့် ရပ်နားစရာမရှိပါ.။ ပတ်ဝန်းကျင်အပြင်၏ အပူချိန်မှာ (3˚) C သာရှိပါသည်.။ ခြေ လက်များ ထုံကျင်နေပြီး အလွန်ချမ်းအေးမှူဒဏ်ကို ခါးစီး ခံစားနေရပါသည်။
အံခဲဇွဲနှင့် ဖြတ်သန်းနေပြီး..နောက်ရှေ့နားရပ်မှာ..Kimberly တွင် စခန်းချနိူင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ဤ ၈၈ စစ်ကြောင်း၏ စစ်သည်များ အား အဆင်ပြေပြေ ဖြတ်ကျော်နိူင်ပါစေရန် အားလုံး မှ ဝိုင်း ဆုတောင်းပေးကြပါရန်..မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
Posted by အာဇာနည် at 2:29 AM
၆၃ နှစ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့သီချင်းဖိုင်..ကဒီမှာ
Posted by အာဇာနည် at 11:14 PM
မြန်မာနိူင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့သာမဂ္ဂီအဖွဲ့ ချူပ်နှင့် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ ၏ ပူးတွဲကြေညာချက်။
Posted by Niknayman at 2:03 PM
ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း အိုကီနာဝါကျွန်းရှိ ကျောင်းတော်မှာနေထိုင်နေတဲ့ နှစ်နှစ်သားအရွယ် ကိုနန် (Conan) ခွေးလိမ္မာလေးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုင်းရှိုင်းစွာနဲ့ရှိခိုးကန်တော့တာတွေ့ ရတော့ အဟိတိရစ္ဆာန်ခွေးတောင် ဘာသာတရားနဲ့ နီးစပ်တဲ့အခါမှာ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ ပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်အလုပ်လုပ်တာတွေ့ ရတော့ ကျွန် တော်တို့ နိုင်ငံမှာ ဘုရားမှန်းမသိ၊ တရားမှန်းမသိ၊ သံဃာမှန်းမသိတဲ့မိစ္ဆာဒိဌိတွေ ခွေးလောက်တောင် အသိ တရားမရှိကြ၊ သံဃာကိုရိုက်သတ် ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုဖျက်စီး ဘုရားဆင်းတုတော်တောင် ခေါင်းပြတ်စေတဲ့ မိုက်ရိုင်းမှုတွေကို ပြန်မြင်ယောင်ပြီး၊ ဒီလို မိစ္ဆာဒိဌိတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာ ဆက် လက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးနေကြဦးမှာလားဆိုတာ လူတိုင်း မိမိကိုယ်မိမိ ပြန်မေးကြစေချင်ပါတယ်ဗျာ။
ခွေးထက်မိုက်သူများကတော့ ခိုင်းစေသူနအဖမိစ္ဆာဒိဌိနဲ့ရိုင်းစိုင်းသူလက်ပါးစေတွေပါ။
Posted by Niknayman at 11:27 AM
ဘုန်းဘုန်းချမှ လုံးလုံးရမယ် (သံချပ်)
သင်္ကြန်အကြို ၊ သကြားအကြို
(မိုး)၃လား မောင်တို့....... (လေ)၃လား မောင်တို့
မိုးရော လေရော နှစ်ညင်သာ.... ဒို့တိုင်ပြည်မှာ အေးချမ်းစေဖို့
မိုးကလေးက မရွာတရွာ...... ရွှင်ကြည်နူးစရာ တန်ခူးလ သင်္ကြန်ပွဲ
လေကလေးက မဖြာတဖြာ.... ရင်ကြည်နူုးစရာ တန်ခူးလသင်္ကြန်ပွဲ
ပိတောက်ရွှေဝါတို့ ပွင့်စေရေး.....မိုးပြေးလေး ရွာတယ်ဆိုရုံလေး
ငုရွှေဝါတို့ သင်းပျံမွှေး...... လေညှင်းလေး ဖြာတယ်ဆိုရုံလေး
မိုးနုလေနု ညံ့ညံ့ညှင်း..... မြတ်သိကြားမင်း ဆင်းလို့လာပေါ့
ပြိုးပြိုး ပြက်ပြက် ဆင်းလို့လာ.... ၀ိုင်းကြိုကြပါ အတာရေအိုးနဲ့
တိုင်းပြည် အေးချမ်းသာ စေရန်....သိကြားမင်းထံ ၀ိုင်းလျှောက်ထားစို့
သိကြားမင်းကြီးမျက်နှာညှိုး....သွေးတက် သွေတိုး ဝေဒနာဆိုးကြောင့်
ကျည်ကာအင်္ကျီ ၀တ်ထားတာ.... နတ်ပြည်နတ်ရွာ စစ်ဖြစ်နေလား
နတ်ပြည်ခြောက်ထပ် စစ်မဖြစ်ပါ…. လူ့ပြည် ကြွအလာ မှန်မှာစိုးလို့
သစ်ကိုင်တခက်ကိုင်ဆင်းလာ… ကြက်ဆူပင်ပါ စိုက်ခိုင်းမလို့လား
ဧကရာဇ်မြစ်ပါ လူသားရာ….. သွေးတိုးတဲ့အခါ သွေးပြီးသောက်ဖို့
သံဃာတော်များ ကျဆုံးသွား .... ဒီလို တပ်သား ၀မ်းမနည်းပါနဲ့
၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းသေဆုံးသွား .... ဒီလို တပ်သား ၀မ်းမနည်းပါနဲ့
လူသတ်ကောင် အတွက် ၀မ်းမနည်းပါ...ဒို့ဝမ်းနည်းတာ 'ဘူတို' သေလို့
သကြားမင်းကို မကျေနပ်ပါ….. ဝေဖန်ချင်တာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း
ထောက်ပြဝေဖန် ပြောစမ်းပါ…. သိကြာမင်းဆိုတာစိတ်ဆိုးတတ်ဘူး
နှစ်ထောင်ခုနှစ်ခုနှစ် အောက်တိုဘာ… ရန်ကုန် တ၀ိုက်မှာ မိုးကြိုးပစ်ခဲ့
မိစ္ဆာကောင် များ တယောက်မှမမှန်…..သိကြားမင်းလက်သံ သိပ်ညံ့တာပဲ
စိတ်မရှိပါနဲ့ လူသားရာ…… ဒေါသထွက်ကာ လက်တုန်နေလို့
သင်္ကြန်ပြီးလို့ ပြန်အတက်မှာ….. ပြန်လေ့ကျင့်ပါ လက်တည့်အောင်လို့
လေ့ကျင့်ပါမယ် ဂတိပေးသကွာ….. နောက်တခေါက်ပစ်တာမလွဲစေဘူး
တို့တိုင်းပြည်ရွာ ငြိမ်းချမ်းလို…. သိကြားမင်းကြီးကို ဆုတောင်းကြစို့
ဒုက္ခ ကင်းအောင်စောင့်ရှောက်ပါ………. (ပြည့်စေဗျာ)၂
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဖန်ဆင်းပါ…… (ပြည့်စေဗျာ)၂
သင်္ကြန်မှာပတ်ဖို့ ရေလိုသဗျာ….. (ပြည့်စေဗျာ)၂
စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံစွာ… (ပြည့်စေဗျာ)၂
ဒီမိုကရေစီ လိုချင်သဗျာ…… ဒါလေးတစ်ခုတော့ ခွင့်လွှတ်ပါဟေ့
သိကြားမင်းကျွန်တော် မတတ်နိုင်ပါ…… လူ့ပြည်ရွာမှာ နိုင်သူရှိရဲ့
သိကြားမင်း ကျုပ်ကို အားမကိုးနဲ့…. သံဃာတွေကို အားကိုးကြကွဲ့
သိကြားမ,လို့ လုံးလုံးမရ….. ဘုန်းဘုန်းချမှ လုံးလုံးရမယ်
ဘုရားတ,လို့ လုံးလုံးမရ…… ဘုန်းဘုန်းချမှ လုံးလုံးရမယ်
တရားတ,လို့ လုံးလုံးမရ....... ဘုန်းဘုန်းချမှ လုံးလုံးရမယ်
သိကြားမင်းကြီး တော့ ကြိုပြီးပေ…. လူထု ဘ၀အခြေ သွားကြည့်ကြစို့။
Posted by အာဇာနည် at 5:46 AM
လက်ပန်တန်းမြို့ နယ်..အညာစုကျေးရွာက ကျောင်းကလေးပါခင်ဗျာ..
နေ့ လည် ၁ နာရီမှာ..ကျောင်းစာသင်ချိန်မှာ စာမသင်ရဘဲ.အလုပ်လုပ်နေရပါတယ်။
ကျောင်းအတွက် အုတ်သယ်..အခမဲ့ လုပ်အားပေးပေါ့ ခင်ဗျာ။
ကျောင်းဆောက်တဲ့ လုပ်အားခတွေ စာရင်း ပြတာတွေက ဆရာမကြီး ရဲ့ ပိုက်ဆံအိပ် အထဲဘဲ ပါသွားလေရဲ့။ ခလေးတွေ တက်ရတဲ့ အိမ်သာကိုသာ..ကြည့်ကြပါ ခင်ဗျာ
Posted by အာဇာနည် at 4:17 PM
ကျေးဇူးပါ ကိုမျိုး ခင်ဗျား
Posted by အာဇာနည် at 1:36 PM
လွတ်မြောက်နယ်မြေမှ ပထမဦးဆုံး ကျောင်းသားတပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း)ရဲ့ ရဲရဲတောက်သံချပ်များ
ချေကွေဗားရား ဖျော်ရည်များ (2006)
၁၉၈၈ခုနှစ် စစ်တပ်မှ န၀တမှ အာဏာသိမ်းပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နယ်မြေဒေသအလိုက် ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ကေအင်န်ယူ ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသတွင် ABSDF (ဗဟို) ကျောင်းသားတပ်မတော် (ဗဟို) အနေဖြင့် ပေါ်ပေါက် ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ နိုင်ငံရေး ဦးဆောင်မှုအောက်မှနေ၍ မြန်မာပြည် (မြောက်ပိုင်း) တရုတ် မြန်မာနယ်စပ် ကေအိုင် အေ ထိန်းချုပ်ရာ နယ်မြေတွင် ABSDF(NB) ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) လက်နက်ကိုင် တော်လှန် ရေးတပ်ဖွဲ့ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့သည်။
ယင်းကဲ့သို့ လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် ပေါ်ထွန်းလာပြီး စစ်ဆင်ရေးများကို ဆင်နွဲနေ သော်လည်း တဖက်မှနေ၍ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်းများ ပပျောက်ခြင်း မရှိစေရန်အတွက် လည်း ကောင်း၊ အာဏာသိမ်း စစ်အုပ်စုများ သရုပ်မှန်များကို ဖေါ်ပြလိုသည့် အတွက်လည်းကောင်း၊ သမိုင်းမှန်များကို ထင်ကျန်ရစ်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) မှ နေ၍ “ချေကွေဗားရား ဖျော်ရည်များ” အမည်ရှိ သံချပ်ခွေအား ၁၉၉၆ခုနှစ် သင်္ကြန်ကာလတွင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့သည်။ တော်လှန်ရေးနယ်မြေရောက် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး ရှိခဲ့ကြသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ သံချပ်ခွေထုတ်ဝေဖြန့်ချိခြင်း ယင်းအချိန်ထိ မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းမျှ ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးခြင်း မရှိသလို တော်လှန် ရေးနယ်မြေရောက် ပထမဦးဆုံးသော သံချပ်ခွေလည်းဖြစ်ပါသည်။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ကေအိုင်အေနှင့်နအဖ အပစ်အခတ်ရပ်စဲပြီး နောက်ပိုင်း မိမိတို့ ကျောင်းသား တပ်မတော် တပ်ဖွဲ့ ၀င် များသည် ကေအိုင်အေဖြင့် တွဲဖက်လှုပ်ရှားနေသော ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာများမှ ဆုတ်ခွာလာခဲ့ရပြီး နောင်ရာပါ ဒေသတွင် တပ်ရင်းစိုက် အခြေချ နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ နောက်တန်းတွင် နေထိုင် နေရသည့် အချိန်တွင် မိမိတို့ ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) အနေဖြင့် ရဲဘော်များ၏ စိတ်ဓါတ်ကြံ့ ခိုင်ရေး၊ သဘောတရား မွမ်းမံသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်းများ၊ စစ်ဆင်ရေး မွမ်းမံသင်တန်းများ သင်ကြား ပေးခြင်း၊ စာပေမတတ်ခဲ့သော ရဲဘော်ရဲမေများအား ကျောင်းဆောက်လုပ်ပြီး အခြေခံမူလတန်း ကျောင်းစာ ပေ များ သင်ကြားပေးခြင်းများ၊ မိမိတို့တပ်ရိက္ခာနှင့် ဒေသနေပြည်သူများ သက်သာချောင်ချိ စေရန်အတွက် စိုက်ပျိုး မွေးမြူရေးများ ပြုလုပ်၍ နေထိုင်နေခဲ့ရသည်။
၁၉၉၆ခု သင်္ကြန်ကာလသို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် တဘက်မှလည်း စစ်ရေးမွမ်းမံလေ့ကျင့်မှုများ၊ စိတ်ဓါတ် ကြံခိုင်ရေးများ၊ သဘောတရားရေးသင်းတန်းများ ဘက်စုံပြည့်ဝခိုင်မာသည့် ကျောင်းသား တပ်မတော် ဖြစ် မြောက်အောင် ပြုလုပ်နေသလို တဖက်မှလဲ မိမိတို့ ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း)၏ ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေးနှင့် စိတ်ဓါတ်မြင့်တင်ရေးဌာန (People Ralation and Encourage Team) မှ ဦးစီးကာ သံချပ် ခွေထုတ်ဝေဖြန့်ချိရန် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ရာတွင် မိမိတို့ ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း)ရှိ တပ်ရင်းများနှင့် ရုံးဌာနအသီးသီးမှ ရဲဘော်များအားလုံးသို့ ရေသားသီကုံး ခိုင်းခဲ့ပြီး ရရှိလာသော သံချပ်များ အား စုစည်းကာ “ချေကွေဗားရားဖျော်ရည်များ” အမည်ဖြင့် သံချပ်ခွေကို ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊၊
အဆိုပါ သံချပ်ခွေ အမည်နာမနှင့် ပတ်သက်၍ သံချပ်ခွေအမည်နာမ ရွေးချယ်ပေးခဲ့သူ ကျောင်းသားရဲဘော်တ ဦး၏ ပြောပြချက်အရ သံချပ်ခွေခေါင်းစဉ်အား “တော်လှန်သူတို့၏သင်္ကြန်”ဟု အစကနဦးက သတ်မှတ်ထား ခဲ့ သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် တော်လှန်သူတို့ ဆိုသောစာသားအစား တချိန်က တောင်အမေရိကတိုက်တွင် လက် နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး သမားတဦးအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့သော ချေကွေဗားရား အမည်အား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးသမားများ၏ သင်္ကေတအဖြစ် သုံးထားခဲ့ပြီး မြန်မာ့ရိုးရာအတာသင်္ကြန်၏ သင်္ကေတအဖြစ် ဖျော် ရည်ကို ယူကာယခုလို “ချေကွေဗားရား ဖျော်ရည်များ”အမည်သို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့သည်ဟု သိရှိရသည်၊
၁၉၉၇ ခုနှစ် ရောက်ရှိချိန်တွင် မိမိတို့ကျောင်းသားတပ်မတော်သည် ကေအိုင်အေ ထိန်းချုပ်ရာ နယ်မြေ အတွင်းတွင် လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့အသွင်ဖြင့် ဆက်လက် ရပ်တည်ခွင့် မရရှိခဲ့တော့ချေ။ သို့ဖြစ်၍ မိမိတို့ ကျောင်းသားတပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း) တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ယင်းနယ်မြေမှ စွန့်ခွာက အခြား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်နေသော တိုင်းရင်းအဖွဲ့အစည်းများထံ ပူးပေါင်း၍ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို ဆက်လက်ဆင်နွဲ၍ လည်းကောင်း လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့များဖြင့် ပူးပေါင်းမှုမရရှိခဲ့ပဲ ကျန် ရှိနေသော ရဲဘော်များမှလည်းကောင်း မိမိတို့ ကျောင်းသားတပ်မတော်၏ ရည်မှန်းချက်၊ ဦးတည်ချက် များကို ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး တိုက်ပွဲဝင်လျက် ရှိနေခဲ့ပါသည်၊၊ အသွင်ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား တွန်းလှန်နေလျက် ရှိနေကြပါသည်။ သို့သော် မိမိတို့ ကျောင်း သားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း) အနေဖြင့် ဆက်လက်၍ သံချပ်ခွေများအား ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနိုင်မှု မပြုလုပ်နိုင် ခဲ့တော့ချေ။
ယခုလို ၂၀၀၈ခုနှစ် သင်္ကြန်ရောက်လာတော့မည့် ကာလတွင် ၁၉၉၆ခုနှစ် အာဏာသိမ်း စစ်အုပ်များ၏ သရုပ် မှန်များ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အခြေအနေမှန်များ၊ န၀တ စစ်အစိုးရလက်အောက် ပြည်သူများ၏ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လူမှုဒုက္ခ အ၀၀ အထွေထွေ တို့ကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာ ပြန်လည် အမှတ်ရ သိရှိနိုင်ရန် အတွက် ယခုလို မြန်မာပြည် အနောက်ပိုင်း အိန္ဒိယနယ်စပ်မှ နေ၍ “ဘုန်းဘုန်းချမှ လုံးလုံးရမည်” ဆိုသည့် သံချပ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ လာချိန်တွင် ကျောင်းသားတပ်မတော် (မြောက်ပိုင်း)မှ ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့ဘူးသော “ချေကွေဗားရား ဖျော်ရည်များ” အမည်ရှိ သံချပ်ခွေအား ပြန်လည် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာလူမျိုး..ဗုဒ္ဓဘာသာတဥိးဟာ.. မိမိ ကိုယ့်ကိုယ် ကို သတ်သေတဲ့ ကိစ္စကို အလွန် မှားယွင်း အပြစ်ရှိပြီး အ ဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ ဖြစ်လေရာ ဘ၀တိုင်းမှာ အပြစ်ပြန်ခံရပါတယ် လို့ ဆိုရိုးရှိခဲ့ပါတယ်။
(၂).အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာ ပြန်ငရဲခံရပါသော်ငြား..မကြောက်မရွံ့အမျိုးဘာသာ..သာသနာ ကို..မြန်မာလူမျိုး..မျိူးချစ်သားကောင်း ဗုဒ္ဓ ဘာသာ၏ ဥပကာကောင်း..အဖြစ်အသက်စွန့် ရန်..မြန်မာများ အဆင်သင့် ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by အာဇာနည် at 8:49 PM
တပ်ပေါင်းစု အထွေထွေသပိတ် တိုက်ပွဲကော်မတီ ၏ကြေညာချက်
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီ တပ်ပေါင်းစု အထွေထွေသပိတ် တိုက်ပွဲကော်မတီ၏ကြေညာချက်
Posted by အာဇာနည် at 9:36 PM
သီးလေးသီး အငြိမ့်( ဂျပန်ဖျော်ဖြေပွဲ)
source of video: Burma Campaign မှ ရယူပါသည်
Posted by အာဇာနည် at 12:00 PM
တောမီးလောင်ရင် တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ်လိမ့်မယ (ညီညွတ်ခြင်း အပိုင်း၂ )
Unity Part II အနေနဲ့ ဆက်ပြီး တော်လှန်ရေး "သတိ" ရှိကြဖို့အကြောင်း ကျနော် ဥာဏ်ရှိသလောက်ဆက် လက် တင်ပြဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ်။
" လိုက ယူ၊ မလိုက ပယ်၊ မှားနေရင် ပြင်" ပြီးတော့ ဖြည့်စွက်တွေးတောပေးကြပါ .. .. ..။
အခုတလော လှုပ်ရှားမှုတွေကို စံနစ်တကျ အများဆုံးလုပ်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ? ဒီမေးခွန်းမှာပါတဲ့ "စံနစ်တ ကျ" ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့အညီ အဆင့်ဆင့် အမိန့်ပေးစေခိုင်းသမျှကို ညီညီညွတ်ညွတ် လုပ်နေတာ ဘယ်သူ တွေလဲ?
အဓမ္မသမားတွေ သူတို့ညီညွတ်နေကြတယ်။ စိုးရိမ်စိတ်တွေ အကြောက်တရားတွေကို ရင်ဝယ်ပိုက် ထား ကြပေမယ့် သူတို့ ညီညွတ်နေကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးက ဗိုလ်သန်းရွေ။ သူ့ကို လျှော့မ တွက်မိစေချင်ဘူး။ ယနေ့ အမြင့်ဆုံးအာဏာကို ကိုင်စွဲထားတဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေဟာ သူလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းမှာ ဘာ တွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုရင် စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး တာဝန်တွေ အများဆုံးယူခဲ့တယ်။ အတွေးအခေါ်ပိုင်းကို အများ ကြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲ။
သူ့ရဲ့ 'အဓမ္မ' တပ်ဖွဲ့ကြီးကို သူကျွမ်းကျင်တဲ့ အတွေးအခေါ် ၀ါဒဖြန့်ချိမှုတွေနဲ့ နိုင်နင်းစွာ အုပ်ချုပ်နိုင်ဆဲပဲဖြစ်ပြီး 'ဓမ္မ' ကို စံနစ်တကျ တိုက်ဖျက်ချေမှုန်းနေတယ်။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ သူတို့ဘာလုပ်နေကြလဲ …… ။
သူတို့တွေ အချိန်နဲ့အမျှ လှုပ်ရှားနေတယ်။ ၀ိရိယ စိုက်နေကြတယ်။ အလုပ်တွေ လုပ်နေကြတယ်။ ရပ်မ နေကြဘူး။ ငြင်းခုံမနေကြဘူး။ လုပ်နိုင်သမျှ လုပ်လို့ရသမျှ အချိန်တိုင်းပြီးအောင် လုပ်နေကြတယ်။
၁။ ကောလဟလတွေ ဖြန့်ချိပြီး လူထုကို အာရုံပြောင်းပေးနေတယ်။ ဦးသန်းရွှေ သေပြီဆိုတာမျိုး၊ မေဆွိ သေပြီဆိုတာမျိုး၊ မင်းသားနိုင်းနိုင်းရဲ့ မိန်းမကိစ္စလိုမျိုး၊ တင့်တင့်ထွန်း၊ မျိုးကျော့မြိုင်၊ . . . . . . . . . . စုံလို့ပါပဲ။
၂။ တောနယ်တွေမှာ တစ်အိမ်ထောင်ကို ငွေသုံးသောင်း ပေးပြီး ကြံ့ဖွတ် ၀င်ခိုင်းတယ်။ နောက်ဆိုရင် မြေကွက် တွေ၊ လုပ်ကိုင်စားနိုင်ဖို့ မြေယာတွေ ချပေးမယ်ဆိုတဲ့ မက်လုံးတွေနဲ့ စည်းရုံးရေးဆင်းနေကြတယ်။
၃။ ရပ်ကွက်တွေထဲမှ ငွေရှိ၊ သိက္ခာရှိ၊ သြဇာညောင်းသူတွေကို ရ.ယ.က ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ထမ်းရွက်စေပြီး အဲဒီလူရဲ့ သိက္ခာ၊ သမာဓိအပေါ်က အမြတ်ထုတ်ပြီး သူတို့ ကြံ့ဖွတ်တွေကို အကောင်းမြင်လာအောင် အမြင် ပြောင်းတဲ့ အလုပ်နဲ့လည်း စည်းရုံးရေး လုပ်နေကြတယ်။
၄။ ရပ်မိရပ်ဖဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေဖွဲ့စေပြီး အဲဒီအဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေကို အခြေခံ ပညာအ ထက် တန်းအောင်စဉ်က အမှတ်နည်းလို့ တက်ရောက်ခွင့်မရှိတဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ ဘာသာရပ်တွေ၊ နိုင် ငံခြားဘာသာသင် တက္ကသိုလ်တွေမှာ တက်ခွင့်ရအောင် အခွင့်အရေးတွေ ပေးပြီး ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ အဲဒီ အတွက် ကြံ့ဖွတ် မ၀င်မနေရ ၀င်ခိုင်းတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးနဲ့ စည်းရုံးရေးဆင်းနေတယ်။
အဲလို ရပ်မိရပ်ဖတွေကို သူတို့ အခုလုပ်မယ့် ဆန္ဒခံယူပွဲတွေမှာ မဲရေတွက်တာကို စောင့်ကြည့်မယ့် သမာသ မတ်ရှိတဲ့ ရပ်မိရပ်ဖအနေနဲ့ တာဝန်ပေးမယ်။
၅။ ရပ်ကွက်တွေထဲက ဘာသာရေး အခမ်းအနားတွေမှာလည်း သံဃာအရေးအခင်းတုန်းက သွေးစွန်းထားတဲ့ လက်တွေနဲ့ လူတွေက ရှေ့တန်းကနေ၀င်ပြီး လူမြင်ကောင်းအောင် သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်ပြီး ဘာသာ ရေးနဲ့ စည်းရုံးရေးဆင်းနေကြပြန်တယ်။
ဆက်ပြောစရာတွေ အများကြီးပါပဲ . . . . . . . . . .
အဲဒီလို သူတို့တွေ မရပ်မနားဆိုသလိုပဲ သူတို့ 'အဓမ္မ' ၀ါဒီတွေအတွက် ညီညွတ်စွာနဲ့ အချိန်တိုင်း သူတို့ကိုယ် ကျိုးအတွက် အကျိုးရှိအောင် မနားမနေ လှုပ်ရှားနေကြတဲ့အချိန်မှာ ………..
ကျနော်တို့ "ဓမ္မ" အတွက် ရင်ဆိုင်ကြိုးစား တိုက်ပွဲဝင်နေသူများ (နေ့တိုင်း၊ အချိန်တိုင်း) ဘာတွေ လုပ်ဖြစ် နေပါသလဲ။ တစ်ဦးချင်း ပြန်လည် ဆန်းစစ် စစ်ဆေးရန် လိုအပ်နေပါပြီ။ အချိန်မရှိတော့ပါ။ အချိန်ကုန် ခဲ့တာ တွေလည်း များလှပြီ။ အချိန်တွေ သိပ်နည်းနေပါပြီ။
နအဖ စစ်အာဏာရှင် အုပ်စုက ကျနော်တို့ရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဘာကြောင့် ပြန်မ လွှတ်ပေးရဲတာလဲ။
အများသိကြတဲ့အတိုင်း ကြောက်လို့ပါ။ ကြောက်လွန်းလို့ပါ။
ဒေါ်စုကို ဘာကြောင့် ကြောက်တာလဲ။ ကျနော်မြင်တာကတော့ "အသိဥာဏ်" ဒေါ်စုရဲ့ အသိဥာဏ်ကို သူတို့ သိပ်ကြောက်တယ်။ နအဖ စစ်အာဏာရှင်အုပ်စု၊ သူတို့ရဲ့ လက်ပါးစေတွေ၊ သာကူးတွေ …"အဓမ္မ" သမားတွေ အားလုံး ကြောက်ဒူးတုန်ကြတယ်။
အဲဒါ အဖြေပါပဲ။ သူတို့ အမှန်တကယ် အကြောက်ဆုံးက အသိဥာဏ် …. ပြည်သူတွေ အသိဥာဏ် ရင့်ကျက် လာမှာကို အကြောက်ဆုံးပဲ။ အဓမ္မသမားတွေ အကြောက်ဆုံးအရာကတော့ ဥာဏ်ဆိုတဲ့အရာပဲ။ ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကတော့ 'အမောဟ၊ ၀ိဇ္ဖာ' စသဖြင့် သိကြပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အကောင်းအဆိုး၊ အ ကြောင်းအကျိုး၊ အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြား သိမြင်တာကို ဥာဏ်လို့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။
အဲဒီ ဥာဏ်ဖြစ်ဖို့က သတိရှိဖို့လိုပါတယ်။ အမြဲသတိရှိတဲ့သူဟာ ဥာဏ်ရှိတယ်။ ဥာဏ်ရှိတဲ့သူကို ဥာဏ်မရှိတဲ့ အ ဓမ္မ သမားတွေ ကြောက်ကြတယ်။
သတိလက်လွတ်ဖြစ်တာနဲ့ တောမီးလောင်သွားလိမ့်မယ်။ တောကြောင်တွေဖြစ်တဲ့ အဓမ္မသမားတွေ လက်ခ မောင်းခတ်လိမ့်မယ်။
မိဘအမျိုးမျိုး၊ ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးမျိုး၊ အသိဥာဏ်ရည်အဆင့်အတန်း အမျိုးမျိုးက မွေးလာကြတဲ့ ကျနော်တို့ဟာ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆတွေ ထပ်တူမကျတာ သဘာဝတရားပါ။
တူလို့ရတာကတော့ သတိပါပဲ။ အမြဲမပြတ် သတိရှိပါ။ အချိန်တိုင်းလုပ်နိုင်တာ ဘာရှိသလဲ။ လုပ်နိုင်တာကို လုပ်ဖြစ်နေဖို့၊ အကောင်းဆုံး လုပ်နေကြဖို့ လိုပါတယ်။ လုပ်ရပ်မတူပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက်တူနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ "အဓမ္မ၀ါဒီ" အာဏာရှင်စစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင် ဖယ်ရှားရေးပါပဲ။ ဓမ္မလွှမ်းမိုးဖို့ တရား တဲ့အလုပ်မှန် သမျှ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ တနိုင်ဝန်ကို လူတိုင်း၊ အချိန်တိုင်း မရပ်မနား လုပ်နေကြဖို့ လိုပါတယ်။
ကျနော်တို့ သတိလက်လွတ် ဖြစ်နေကြသလား။ မေ့မေ့လျော့လျော့နဲ့ အချိန်ဖြုန်းပြီး ငြင်းခုန်ရင်းနဲ့ အင် အားဖြုန်းမိနေကြသလား။ ပြန်ပြီးမေးဖို့ လိုလာပါပြီ။ ရန်သူက မရပ်မနား အလုပ်လုပ်နေတယ်။ ကျနော်တို့က ဘာလုပ်နေသလဲ။
အခြေအနေအလုံးစုံကို ဂဃဏန မသိကြသေးတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် …….
ပြောနိုင်တဲ့သူ၊ ပြောတတ်တဲ့သူတွေက ပြောကြပါ။
ရေးနိုင်တဲ့သူ၊ ရေးတတ်တဲ့သူတွေက ရေးကြပါ။
ဆောင်ပုဒ်တွေ စာရွက်တွေ ဝေနိုင်တဲ့သူက၊ ဝေဖို့တာဝန်ယူနိုင်သူတွေက ဝေကြပါ။
အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ နိုင်ရာဝန်ကို ထမ်းပြီးတော့ ပြည်သူလူထုကို အသိဥာဏ်ဖွင့်ပေးကြပါ။ အနည်းဆုံး မတရား တာကို မတရားကြောင်း ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောရဲဘူးဆိုရင်တောင် ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ မိသားစုဝင်တွေကိုတော့ ပြောနိုင်အောင် စပြီး ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။
ဘာတွေပဲလုပ်နေနေ ရည်ရွယ်ချက်တူကြပါတယ်။ ဥာဏ်ရည်မတူကြပေမယ့် တော်လှန်ရေးသတိကတော့ တူ နေကြပါတယ်။ ရပ်မနေဘဲ လှုပ်နေဖို့၊ ဆက်လျှောက်နေဖို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။ အချိန်တိုင်း သတိရှိနေပြီး လုပ် နိုင်တာ လုပ်နေကြမှ အချိန်တိုင်း အကျိုးရှိမှာပါ။ အကျိုးမဲ့ ရပ်မနေကြပါနဲ့။
(ကိုယ်ကျိုးရှာသမား ၀ိသမလောဘသား အဓမ္မ၀ါဒီအုပ်စုက အကျိုးစီးပွား လာဘ်လာဘကို အခြေခံပြီး၊ ညီညွတ် မှု တည်ဆောက်နေကြတယ်။ စည်းရုံးရေးလုပ်နေကြတယ်။)
ကိုယ်ကျိုးစွန့်သူ၊ အများချမ်းသာစေလိုသူ ကျနော်တို့ ဓမ္မ၀ါဒီများက သတိဦးစီးသော အဆင့်မြင့်တဲ့ အသိ ဥာဏ်ကို အခြေခံပြီး သဘော ထား မှန်စွာဖြင့် ဓမ္မစိတ်ဓာတ်၊ ဓမ္မခွန်အားဖြင့် တညီတညွတ်တည်း တွန်းလှန်ကြ ပါစို့ဟု တိုက်တွန်းအပ်ပါသည် ခင်ဗျား။
Posted by အာဇာနည် at 5:27 AM
လူထုတရပ်လုံးအတွက် စတေးခံ အကောင်းဆုံးမြေသြဇာအဖွဲ့ ကြေညာချက်
Posted by အာဇာနည် at 2:59 AM
လူ့ အခွင့်အရေးနေ့ လှုပ်ရှားမှူများ ( နဂိုရာ. ဂျပန်)
Burmese's Human Right Day Activity, Burmese and Japanese people marching in Osaka-Japan on 16th March, 2008.
People from League for Democracy in Burma - Nagoya and people from NLD - Nagoya went to Osaka on 16th March 2008 and joined with people from Burma Relief Center-Japan, and Marched in Osaka.
Posted by အာဇာနည် at 2:33 AM
မကြာသေးခင်က သံဃ့အစည်းအဝေးကြီးကျင်းပနေခဲ့ပြန်ပါပြီ။ အဲ့ဒီ အစည်းအဝေးမှာ မကွေးဆရာတော်ကြီး ဘဒ္ဒန္တကုမာရ ဆရာတော်ရဲ့ သြ၀ါဒထဲမှာ သံဃာ့ဥသျှောင် အဖွဲ့ကို ရည်ရွယ်ပြီး "မောဃပုရိသ" ဆိုပြီး ရည် ညွှန်း သွားခဲ့တာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က အရပ်သား အရပ်ဝတ်တွေပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါ။ ဗုဒ္ဓဓမ္မတွေ ဖတ်ရှု့လေ့ လာရ သလောက် ရော တခြားဘာသာရေး စာပေတွေ ဖတ်သမျှ အရပါ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘာသာရေးတွေ ပေါ်ပေါက်ရတာဟာ "လူ" တွေရဲ့ ဒုက္ခ အ၀၀တွေကို ကယ်တင်ဖို့အတွက် ချည်းပါဘဲလို့ နားလည်ရပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ဒုက္ခတွေ လက်တွေ့ ကျကျ မကူညီနိုင် မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ဘာသာရေး (၀ါ) သာသနာ ဆိုတာလဲ ပျောက်ကွယ်ရမှာပါဘဲ။
ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ ဓမ္မတွေဟာ လောကီလူသားတွေရဲ့ ကောင်းကျိုအတွက် လောကီကျင့်စဉ်တွေ (ဥပမာ ၃၈ဖြာ မင်္ဂလာ) တို့၊ မင်းကျင့်တရား ၁၀ပါးတို့၊ ပိုပြီး အဆင့်မြင့်လို့ သံဃအဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်လာတဲ့အခါ ၂၂၇သွယ် သိက္ခာပုဒ် တို့နဲ့ အများအပြား သူ့ကဏ္ဍနဲ့သူ ဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် သာသနာအဖွဲ့အစည်းအတွက် သာသနာမဟုတ်ပါဘူး။ လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ သံဃာတော်များအတွက် သာ သနာတော်ပါ။ ယခုလက်ရှိ သာသနာတော်ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ သံဃာ့ဝန်ဆောင်ဆရာတော်များရဲ့ ဒကာ အစစ် ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ ဒုက္ခအ၀၀၊ သာသနာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ရဟန်းတော်များရဲ့ ဘေးဒုက္ခအ၀၀ကို စောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်မကျေခဲ့လို့ "သာသနာမောလိ" ဆိုတဲ့ သံဃာ့ အဖွဲ့အစည်းတရပ် ပေါ်ပေါက်လာ တာ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ၀မ်းသာပန်းသာနဲ့ ကြိုဆိုရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်ကာလကိုဘဲကြည့်ပါ။ ယခု သံဃာဝန်ဆောင် ဆရာတော်အဖွဲ့က ဘာ တစ်ခွန်းများကိုယ့်ရဲ့ ရဟန်းတွေအတွက်၊ ပြည်သူတွေအတွက် ဒုက္ခအပေါင်းက လွှတ်အောင် ပြောပေး ခဲ့ဘူးပါသလဲ။ ဒါကြောင့် ရှင်းရှင်းလေးဘဲမြင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည် သာသနာဖျက်တာ၊ ညှိုးမှိန်စေတာ အဂတိ ၄ပါး မကင်းတဲ့ သံဃာ့ဝန်ဆောင် ဆရာတော်တွေမှာ တာဝန်ရှိပါတယ်။
တကယ်လို့ သာသနာတော် သက်သက်အတွက်ဘဲလို့ ဆရာတော်တို့ပြောတဲ့ "သန့်ရှင်းတည်တံ့ပျံ့ပွားရေး" သက် သက် အတွက်ပဲ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံယူထားရင် ဆရာတော်တို့ စစ်အစိုးရဆီ ကဘဲ ဆွမ်းကွမ်း အလှူ ခံကြပါ။ တခြား အရပ်ထဲက ပြည်သူတွေဆီက အလှူမခံကြနဲ့၊ ဆွမ်းစား ကွမ်းစား မကြွကြနဲ့လို့ဘဲ ထောက်ပြ စရာရှိပါတော့တယ်။
စေတနာဟာ ကံတရားဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင် ဘယ်ဆရာတော်တွေက စေတနာကောင်း၊ ဘယ်ဆရာတော်တွေ ကတော့ စေတနာမဲ့/ဆိုး ဆိုတာ သတ္တ၀ါတခု ကံတခု စကားအရ မကြာခင် အဖြေပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
တခုတော့ လျှောက်ထားပါရစေ .. ကြခတ်ဝိုင်းဆရာတော်ရဲ့ သားသုံးသား တရားတော်နဲ့ ပီနန်ဆရာတော်ကြီး တို့ရဲ့ "သာသနာ့မောလိ" အဖွဲ့အစည်းမှာ ဘယ်သူက "မောဃပုရိသ" သာသနာဖျက်အတွင်းလူလဲဆိုတာပါ? အမှန်တရားအတွက် ငရဲကြီးမယ်လို့ မယူဆပါဘူး။ ဘုရားမျက်နှာကိုဘဲကြည့်တာပါ။
ကျင်ကြီးစွန့်ချင်စွန့် ကျင်ငယ်တော့မစွန့်နဲ့ (ညီညွတ်ခြင်း အပိုင်း ၁)
(အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦးထုံးကို ကောက်နှုတ် ကိုးကားခြင်းဖြစ်၍ စကားလုံး အသုံး အနှုန်းများ ရင့်သီးနေ ပါက ခွင့် လွှတ် နားလည်ပေး ကြစေလိုပါသည်။)
အခုတလောမှာ မတူညီတဲ့အမြင်တွေနဲ့ ကျနော်တို့ချစ်တဲ့ ပြည်သူလူထုကြားမှာ လွန်ဆွဲနေကြတာကို မြင်နေ တွေ့နေ ကြားနေရတဲ့အတွက် ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ဖူး၊ သိခဲ့ဖူး၊ မှတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦးရဲ့ ဇာတ် လမ်း တစ်ခုကို သတိတရ ရှိမိလို့ ပြန်ပြီး ဖောက်သည်ချရင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုး အဖြေထုတ်ထားတဲ့ အတွေး လေးတစ်ခုကို တင်ပြရင်း . . . . .
ဒေါ်စုကိုချစ်တဲ့ နိုင်ငံကိုချစ်တဲ့ ပြည်သူလူထုအကြားမှာ ညီညွတ်နေတာကိုပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကြားချင်၊ မြင်ချင်မှာ ဧကန်ပါပဲ။
No Vote (မဲမပေးရေး၊ သပိတ်မှောက်ရေး၊ နည်းပေါင်းစုံဖြင့်တိုက်ဖျက်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေခြင်း) လည်း မှန်တယ်။ ဘယ်သူတွေအတွက်လဲ။ ဘယ်လိုတွေးတဲ့သူတွေအတွက်လဲ။
ဒါရဲ့အဖြေကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ အသည်းကြားမှ မဲတစ်ပြားစီကို တရားမျှတစွာ ရရှိခဲ့ပြီး အနိုင်ရရှိထားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့၊ နိုင်ပြီးသားရလဒ်ကို အကောင်အထည် မဖော်ပေးဘဲ နောက်တစ်ပွဲ ကျင်းပမှာကို ဆန့်ကျင်ဖို့ မဲမထည့်ဖို့ ပြောဆိုနေကြသူတွေ အနေနဲ့၊ No Vote လုပ်ဖို့ ယုံကြည်ချက် ခိုင်မာစွာ ဆုံးဖြတ်ထားတာလည်း မှန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နအဖအလိုကျ လုပ်မယ့် Referendum ဆန္ဒခံယူပွဲကို တရားမ၀င်ဘူးလို့ ပြတ်ပြတ်သားသား ကန့်ကွက်နေတာပဲ။
ဒါ အမှန်တရား (သစ္စာတရား) ပါ။
နောက်တစ်ခုက Vote No (မဲရုံသို့သွား၍ ကန့်ကွက်မဲပေးခြင်းဖြင့် ဆန့်ကျင်ခြင်း) ဒါလည်း မှန်တာပါပဲ။ ဘယ်လိုသူတွေအတွက် မှန်သလဲ။ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေရရင် အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦးလို လူမျိုးအတွက် က မှန်ပါတယ်။
နီးရာဓားကို ကြောက်နေရတဲ့ အမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦးလို (ပြည်သူလူထုကြီး) အတွက်ကတော့ မှန်ပါတယ်။ Vote No ဟာလည်း မှန်ပါတယ်။
လွတ်လပ်တဲ့စိတ်၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ် ဘယ်လိုမှ မရနိုင်တဲ့ live with fear နဲ့ နေရတဲ့ ဘုရင့်ရဲ့ လက်သုံးတော် ဓား ကို ကြောက်နေရတဲ့ အမတ်ကြီးဦးပေါ်ဦးလို ဖြစ်နေရ၊ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ (ပြည်သူလူထုအများ) အတွက်က အဲဒီ Vote No ဟာ မှန်နေပြန်ပါတယ်။
ဦးပေါ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့အိမ်ရှေ့မှာ မစင် လာစွန့်ဖို့လုပ်နေတဲ့ မင်းခယောက်ျားကို ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ။ ဒါ ဟာ ယုတ်မာတဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ အလုပ်ဆိုတာ မသိဘူးလားလို့ မေးတော့ ဘုရင်က မစင်စွန့်ဖို့ အမိန့်ပေးလိုက် ကြောင်း၊ ဘုရင့်အမိန့်နဲ့ လုပ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လျှောက်ပါတယ်။
သူကိုယ်တိုင်ကလည်း မင်းမိန့်ကို မလွန်ဆန်ရဲ၊ မလွန်ဆန်နိုင်၊ နီးရာဓားကို ကြောက်နေရတဲ့အတွက် ကဲ .. ဒါ ဆိုလည်း မင်းမိန့်အတိုင်း မစင်တော့စွန့်၊ ကျင်ကြီးတော့စွန့်၊ ကျင်ငယ် လုံးဝမထွက်စေနဲ့၊ မင်းမိန့်မှာ မစင်စွန့်ဖို့ပဲ ပါတယ်။ ကျင်ငယ်စွန့်ဖို့မပါဘူး။ ကျင်ငယ်ထွက်ရင် ဇက်ပြုတ်မယ်ဆိုပြီး ဓားမိုးပြီးတော့ မစင်စွန့် ခွင့်ပြုလိုက် တယ်။
နီးရာဓားကို ကြောက်ရလို့ မဲရုံကို သွားပြီးတော့ မဲထည့်ရတာကတော့ ဦးပေါ်ဦးရဲ့ မစင်စွန့်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ နည်း ပါပဲ။
ကျင်ငယ်စွန့်ဖို့ ခွင့်မပြုတာကတော့ ကန့်ကွက်မဲထည့်ခြင်း၊ သဘောမတူ ဆန့်ကျင်တဲ့ နည်းပါပဲ။ အဲဒီ နည်း ကို သုံးလိုက်တဲ့အတွက် မူလ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ မစင်စွန့်ခြင်းအမှုပါ မအောင်မြင်ဘဲ ပျက်ပြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ကျင်ကြီးသာစွန့် ကျင်ငယ်မစွန့်နဲ့၊ ကျင်ငယ်ထွက်ရင် ဇက်အပြုတ်ပဲ ဆိုပြီး ဓားမိုးပြီး မင်းမိန့်အတိုင်း မစင်စွန့်ခွင့် ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျင်ငယ်မထွက်ရဆိုတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ကန့်ကွက်မဲတွေကလည်း ကျင်ကြီးစွန့်မယ့်အရေးဖြစ်တဲ့ ဥပဒေ မူကြမ်းအတည်ပြုရေးကို ချေဖျက်ပေးကောင်း ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နီးရာဓားကို ကြောက်နေရသူများ၊ အခြေအနေအရ အလွန်အကျဉ်းအကြပ်ကို ရောက်နေရသူများက ပညာရှိအမတ်ကြီး ဦးပေါ်ဦးလို ဒီနည်းကို သုံးလို့ရပါတယ်။
No Vote ပဲလုပ်လုပ် Vote No ပဲလုပ်လုပ် နအဖ စစ်အာဏာရှင်ကို ဆန့်ကျင်တာကတော့ အမှန်ပါပဲ။ အဲဒီအတွက် ညီညွတ်ရေးကို အလျင်အမြန် တည်ဆောက်ရမယ့်အချိန်တွင် ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက် အနေအထား မတူသော်ငြား တူညီသော အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် တွဲလက်တွေမြဲကြပါစို့ဟု အကြံပြုတိုက်တွန်းရင်း Unity Part I ကို စတင်လိုက်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိပါဘူး။
သိတယ်လို့ ပြောတဲ့သူဟာ လှည့်စားချင်တဲ့သူပဲ။
အခြေအနေတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကို စိန်ခေါ်နေတယ်။
သတ္တိရှိတဲ့သူဟာ စိန်ခေါ်နေတဲ့အခြေအနေကို ကြိုက်တယ်။
အခြေအနေတိုင်းမှာ ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘာမဆို ဖြစ်နိုင်လို့ ကိုယ့်မှာ ရွေးစရာရှိတယ်။
Find your own pathways.
ကိုယ့်လမ်းကို ကိုယ် ရှာပါ။
လမ်းမရှိလျှင် လမ်းဖောက်ပါ။ သူများမသွားတဲ့နေရာကို သွားပါ။
Take the risk! စွန့်စားပါ။
စွန့်စားတဲ့သူမှ အသက်ဝင်နေတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ရှင်သန်နေတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။ ကြီးထွားနေတဲ့သူ ဖြစ်တယ်။
I am the master of my faith ; I am the captain of my soul.
ငါသည် ငါ့ ကံကြမ္မာ၏ အရှင်သခင်ဖြစ်၏။ ငါသည် ငါ့ စိတ်ဓာတ်၏ ပဲ့ကိုင်ဖြစ်၏။
ငါ၏ ဦးခေါင်းသည် သွေးချင်းချင်းနီနေ၏။ သို့သော် ညွတ်ကားမညွတ်။
Posted by အာဇာနည် at 5:24 AM
No Vote (မဲမပေးရေး၊သပိတ်မှောက်ရေး၊ နည်းပေါင်းစုံဖြင့်တိုက်ဖျက်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေခြင်း) နဲ့ Vote No (မဲရုံ သို့ သွား၍ ကန့်ကွက်မဲပေးခြင်းဖြင့် ဆန့်ကျင်ခြင်း) ဟူ၍ နအဖကို ဆန့်ကျင်တာချင်းအတူတူ ဘာကြောင့် ပြည်သူ လူထုကို ပေးသော သတင်းစကား တွင် နှစ်မျိုးဖြစ်နေရပါသလဲ။
နအဖကို ဆန့်ကျင်တာ အမှန်တရားဘက်တွင် ရပ်တည်ခြင်းပါပဲ။
ကျနော်တို့ တွေးကြည့်ဖို့ မေ့နေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ချစ်တဲ့၊ ကျနော်တို့ရဲ့ လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုရင် လူထုကို ဘယ်လို သတင်းစကားပါးမလဲ။ ဒေါ်စုသာ ကျနော် တို့နဲ့အတူ (အကျယ်ချုပ်ခံနေရခြင်းမရှိဘဲ) အပြင်မှာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ကို ဘယ်လမ်းကနေ လက်တွဲ ခေါ်ဆောင်သွားမှာလဲ။
အဲဒီမှာ ကျနော်တို့အတွက်၊ ပြည်သူတွေအတွက် ဒေါ်စုရဲ့ အနစ်နာခံမှုတွေဟာ ဘာအတွက်လဲ။ တရားမျှတမှု၊ လွတ်လပ်မှု၊ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေကို နိုင်ငံသားတိုင်း တန်းတူညီတူ ရရှိခံစားပိုင်ခွင့်အတွက်ပဲ။ ဒေါ်စုဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က စတင်ပြီး ဘယ်လိုရပ်တည်ခဲ့သလဲ။ လူထုတွေကို ဘယ်လိုလမ်းညွှန်ပြခဲ့သလဲ။
ကျနော် တွေ့သလောက်၊ ခံစားလို့ ရသလောက်ကတော့ ဒေါ်စုဟာ အမှန်တရားအတွက်ပဲရပ်တည်တယ်။ ပြည် သူတွေကိုလည်း အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးဖို့၊ တရားတာကို လုပ်ဖို့၊ မတရားတာကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့၊ စိတ်ဓာတ် ခွန်အားသတ္တိတွေ မွေးကြဖို့ကိုပဲ တောက်လျှောက် လမ်းညွန်ခဲ့တယ်။
No Vote ရော Vote No ရောဟာ ပြည်သူလူထုကို မတရားဖိနှိပ်ချုပ်ချယ် နှိပ်စက်နေတဲ့ နအဖကို ဆန့်ကျင် တာ ဖြစ်လို့ နှစ်ခုလုံးမှန်တယ်။
ဒေါ်စုသာ ကျနော်တို့နဲ့ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်မှာလဲ။ ဒီပွဲကို တနည်းအားဖြင့် ဒေါ်စုက ကျနော်တို့ကို မှတ်ကျောက်တင်မယ့်ပွဲလို့ ယူဆတယ်။
အခုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေအတွက် ဘ၀တစ်ခုလုံး ပေးဆပ်ထားတဲ့ ဒေါ်စုအတွက် ကျနော်တို့ဟာ “ဒေါ်စုသာ ကျနော်တို့နဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင်“ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကနေစတင်ပြီး Unity လုပ်ကြပါစို့ဟု၊ ဒေါ်စု လျှောက်မယ့် လမ်းအ တိုင်း ရဲရဲကြီး လျှောက်ကြပါစို့ဟု အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၊ အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ ပြည်သူလူထုအပေါင်းအား အနူးအညွတ် ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Negative peace is the absence of tension.
အခြေအနေတင်းမာမှု မရှိတာကို အနှုတ်လက္ခဏာ ငြိမ်းချမ်းမှုလို့ ခေါ်ပါတယ်။
Positive peace is the presence of justice.
တရားမျှတမှု ရှိတာကို အပေါင်းလက္ခဏာ ငြိမ်းချမ်းမှုလို့ ခေါ်ပါတယ်။
တရားမျှတမှု မရှိရင် လွတ်လပ်မှုမရှိဘူး။
တကယ်လွတ်လပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အားနည်းချက်တွေကို ကိုယ်အမြဲတမ်း မျက်ချည်မပြတ် သတိထား နေရ မယ်။ အဲဒီ အားနည်းချက်တွေထဲမှာ သက်သာအောင် နေရဖို့နဲ့ လွတ်လပ်မှုနဲ့ လဲလိုက်ချင်တဲ့ အားနည်း ချက် ဟာ ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးပဲ။
Posted by အာဇာနည် at 4:00 AM
Posted by အာဇာနည် at 1:54 AM